Mbadamba ụrọ kacha mma nke 2017 | Akụkọ akụrụngwa
Mbadamba ụrọ kacha mma nke 2017
José Alfocea | | mbadamba
Ọtụtụ n'ime unu nwere ike ịchọ mbadamba ọhụụ dochie ngwaọrụ ochie gị ma obu, ikekwe, ihe ichoro bu zụta tebụl mbụ gịt. Ugbu a bụ oge dị mma, kedu ka ọ si akụ na ngwaọrụ ndị na - emegharị (laghachi n'ụlọ akwụkwọ, laghachi ọrụ ...) mana kedụ mbadamba ịhọrọ?
Eziokwu bụ na ahịa juputara na nhọrọ, ọtụtụ na iche iche, ma na imewe, arụmọrụ na, n'ezie, na ọnụahịa. Ọ bụ ya mere taa anyị chọrọ ịkọwa ntakịrị na oke osimiri a nke ohere ma gosi gị ụfọdụ n'ime mbadamba nkume kacha mma nke 2017. Ikekwe, n'ikpeazụ, ị gaghị ahọrọ nke ọ bụla n'ime ndị anyị na-atụ aro, mana, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ ga-abụ ebe dị mma ịmalite ma ga - enyere gị aka ịchọta mbadamba nke kachasị gị mma.
1 Mbadamba 5 kacha mma nke 2017
1.2 Akwụkwọ Logavo Yoga
1.4 Xiaomi My Pad 3
2 Mbadamba kacha mma nke 2016
Mbadamba 5 kacha mma nke 2017
Mbadamba nkume "nke kachasị gị mma." M na-ekwu onwe m n'ihi na, ọ bụ ezie na ọ bụ na ogo na akụrụngwa, arụmọrụ, wdg, ụfọdụ mbadamba dị mma karịa ndị ọzọ, ọ bụkwa eziokwu na mbadamba ihe kacha mma maka onye ọrụ ọ bụla bụ nke kachasị gbanwee maka mkpa ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị ga-eji ya sọọfụ ịntanetị, lelee vidiyo YouTube, lelee email yana, n'ozuzu, ihe omume chọrọ ihe ole na ole, ị nwere ike ghara ịnọ otu puku ma ọ bụ karịa euro na iPad Pro n'elu ọnọdụ. Ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ iwere ya ebe niile n'ihi na ihe ịchọrọ bụ iripịa akwụkwọ elektrọnik, ị ka na-ahọrọ mpempe akwụkwọ kọmpụta karịa.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị ga-eji mbadamba nkume gị rụọ ọrụ kwa ụbọchị, n'ihi na jikwaa ọmụmụ ihe gị, na-edetu na ndị ọzọ, ịchọrọ ngwaọrụ dị ike, nke nwere ọtụtụ ọrụ na nke ahụ agaghị atụ ụjọ mgbe ị na-eji ngwa abụọ ma ọ bụ atọ n'otu oge.
Nke ahụ kwuru, ọzọ anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime mbadamba nkume kacha mma nke 2017 n'ụzọ zuru oke, nke ahụ bụ, ngwaọrụ ndị nwere nnukwu mma, ike na arụmọrụ, na nke bara uru maka ịgụ akwụkwọ a na ihe nchọgharị karịa maka ịmepụta atụmatụ nke ụlọ. Anyị na-amalite.
Ọkọnọ n'oge ikpeazụ Mobile World Congress na Barcelona, ​​e nweghị obi abụọ na Samsung Galaxy Tab S3 Ọ bụ otu n'ime mbadamba nkume kacha mma nke 2017.
Ngwaọrụ a nwere 9,7 anụ ọhịa ahụ na mkpebi 1536 x 2048 pikselụ, ogo zuru oke ma maka ndị chọrọ iwere ya na ha ebe niile yana maka ndị chọrọ iji ya n'ọrụ na / ma ọ bụ n'ọmụmụ ihe.
Emere aluminom, ọ na-abịa na Android 7 Nougat n'ime nke a na-akwado site na a njikwa Snapdragon 820 quad-isi tinyere Adreno 530 GPU, 4 GB nke Ram, 64 GB nchekwa na ị nwere ike ịgbasa site na iji kaadi microSD nke ruru 256 GB, na mmesapụ aka 6000 mAh batrị na usoro nchaji ngwa ngwa na njikọ USB-C.
Ha anọ okwu AKG / Harman stereo a na-etinye ya n'akụkụ ala maka ahụmịhe dị egwu.
Ọ bụ ezie na na mbadamba nkume anyị anaghị ewekarị ọtụtụ foto, anyị enweghị ike ichefu ya 13 MP igwefoto isi ike ịdekọ vidiyo na 4K na 30 FPS.
Ọzọ nke kacha mma mbadamba 2017 na-abịa anyị site na nke a prestigious Oriental firm. Ọ bụ ihe gbasara Akwụkwọ Logavo Yoga, a ngwaọrụ dị nnọọ iche na nke ọzọ mbadamba na anyị nwere dị na nke ugbu a ahịa.
Ọ bụ ezie na ọ bụ mbadamba, Lenovo Yoga Book bụ ụdị ngwakọ ngwaọrụ N'ime ya ị ga-ahụ ma keyboard ma otu mgbakwunye nke nwere mmetụ na nke ị ga-enwe ike iji aka dee, yabụ ọ dabara adaba maka ọrụ ndị dị ka ịdekọ ọkwa.
Banyere nkọwapụta teknụzụ, ọ nwere 10,1 nke anụ ọhịa ahụ Full HD ihuenyo (1920 x 1200 pikselụ) na n'ime anyị na-ahụ a njikwa Atọm X5-Z8550, tinyere 4 GB nke Ram y 64 GB nchekwa n'ime. Na mgbakwunye, batrị 8500 mAh ya na-ekwe nkwa ruo elekere 10 nke iji otu ụgwọ, yabụ ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ nnwere onwe zuru oke na-arụ ọrụ, n'ụlọ ma ọ bụ na ọpụpụ gị.
Tinyere ihe niile dị n'elu, ekwesịrị ịdeba ama na ọ bụ a ala ma fechaa ngwaọrụ, ọ dị obere na-atụle 690 gram, nke gụnyere onye na-agụ maka kaadị micro SD, Njikọ LTE, Bluetooth, WiFi, yana igwefoto igwefoto 8 MP na igwefoto n'ihu nke 2 MP na, ọ bụ ezie na ha abụghị ndị kachasị mma n'ahịa, dị ezigbo mma maka ojiji e nyere ụdị ngwaọrụ a.
Anyị na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ ọzọ amaara ama na afọ ndị na-adịbeghị anya yana ya Asus ZenPad 3S 10, mbadamba nkume, n'agbanyeghị aha ya, na-enye a 9,7 anụ ọhịa ahụ nwere pikselụ 2048 x 1536 na njupụta nke pikselụ kwa elekere nke 264.
Emere aluminom, ọ bụ eziokwu na ọ na-eweta ikuku ụfọdụ na Apple iPad, mana n'ime ya ụlọ a Nhazi MediaTeK MT8176 isi isii tinyere 4GB Ram, 64GB nchekwa n'ime, 5.900 mAH batrị, oghere kaadi microSD, USB Type-C connector, were gabazie.
Isi ya adịghị ike nwere ike ịbụ igwefoto ya, dị mfe, 8 MP onye bụ isi na 5 MP n'ihu otu, agbanyeghị na gram 430 ya ọ bụ otu n'ime mbadamba ụrọ dị na ya.
Xiaomi My Pad 3
Maka ndị na-ahọrọ ngagharị ma jiri mbadamba ahụ rụọ ọrụ na ntanetị, lelee ozi, ịgụ na ọrụ ndị yiri ya, n'enweghị obi abụọ ọ bụla otu mbadamba nkume kacha mma bụ nke a Xiaomi My Pad 2 con 7,9 anụ ọhịa ahụ na 2560 x 1600 mkpebi na ibu ibu nke na naanị 328 grams, n'ime nke anyị na-ahụ a MediaTek MTK8176 isi ihe nhazi tinyere 4 GB Ram, 64 GB gbasaa n'ime nchekwa, na a Batrị 6600 mAh nke kwere nkwa ruo awa iri na abụọ nke nnwere onwe.
Na ngalaba vidiyo na foto, o nwere 13 MP igwefoto isi na autofocus na oghere f / 2.2, yana a 5 MP n'ihu igwefoto nwere oghere f / 2.0.
Ma dịka ị nwere ike iche n'echiche, ịbụ ngwaahịa Xiaomi, ọnụahịa ya ga-abụ ihe na-atọ ụtọ karịa.
Site na China anyị gara obodo ọwụwa anyanwụ, Japan, ịgwa gị maka nke a Sony Xperia Z4, mbadamba dị egwu nke na-agbago 10,1 inch ihuenyo Site na mkpebi nke 2560 x 1600 pikselụ na, n'ihi nha na ogo, kwesịrị ekwesị maka oriri ọdịnaya na ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ.
Mbadamba nkume a kwadoro site na a Nhazi Qualcomm Snapdragon 810 Na-esonyere 3 GB nke Ram na 32 GB nke nchekwa esịtidem expandable ekele ya microSD kaadị oghere, na a 6.000 mAh batrị.
Na mgbakwunye, na-eri kilogram 389, ọ dị ezigbo mkpa na ọkụ, mgbochi mmiri, ma nwee ụlọ igwefoto 8,1 MP dị n'akụkụ igwefoto n'ihu 5,1 MP.
Mbadamba kacha mma nke 2016
Eziokwu bụ na anyị ka nwere ike ịkọwa ụfọdụ mbadamba nkume nke nwere ike ịbụ akụkụ nke ndepụta a nke mbadamba kacha mma nke 2017, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ebuteghị ha n'ahịa n'afọ a. Na-enweghị na-aga n'ihu, na Mgbasa ozi MediaPad M3 nke Huawei nwere ihuenyo 8,4 nke anụ ọhịa ahụ, MediaPad T2 10.0 Pro, ma ọ bụ Spanish BQ Aquaris M10 Ha bụ ndị siri ike na-aga ime, mana anyị hapụrụ gam akporo ka anyị kwuo maka ihe ọ bụ la mbadamba kacha mma 2016: Apple's iPad Pro.
Ihe mbụ nke ga-adọrọ uche gị bụ na m kwuru banyere ọgbọ gara aga nke iPad Pro (nke egosiri na njedebe nke 2015 ihe ngosi 12,9 ″, na oge opupu ihe ubi nke 2016 ihe 9,7)), ọ bụghị ụdị nke ugbu a. Ihe kpatara ya bụ ihe dị mfe: dịka Apple na-anwa ire anyị mma dị egwu, ọgbọ nke abụọ nke iPad Pro na-eme otu ihe ahụ dịka ọgbọ nke mbụ, mana uru bụ na inwere ike inweta ya na onu ahia ka nma.
Site na iPad Pro anyị nwere ike ịkọwapụta nnukwu ya 12,9 ″ Ngosipụta Retina, karịrị nke ọtụtụ kọmputa edetu, ya 10 awa nke nnwere onwe, dị ike Nhazi A9X soro M9 ngagharị coprocessor, Bluetooth 4.2 Njikọta, WiFi, nhọrọ mobile Njikọta…. Na ihe niile a na-enweghị banyere na ọ bụ ngwaọrụ nke, n'agbanyeghị nha ya, dị oke ọkụ na mkpa, na-eme ka ọ dị mma iburu ebe ọ bụla n'agbanyeghị, n'ụzọ doro anya, ọ bụghị obere mkpanaka dị ka mbadamba 7,9.
Mana ihe pụtara ihe iPad Pro abụghị iPad Pro n'onwe ya, mana Nchikota iPad Pro na iOS na ngwa ya. Sistemụ nrụọrụ, ọkachasị iOS 11, na-ewepụta arụpụta ọkwa ọhụrụ; ugbu a ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ na iPad, dịka ọ dị m. Na Smart keyboard ọ na-agwakọta nke ọma na ngwaọrụ ahụ, yana ị chọghị bluetooth, enweghị nkụja ọ bụla, enweghị igbu oge, ihe ị na-ede na-egosi na ihuenyo ozugbo ịpịrị igodo ya.
Ndien ke akpatre, Ntụle Apple, ezigbo ihe ijuanya nye ndị ma etu esi ese (ọ bụghị dị ka m) na iji aka na-edetu ma na-edetu: nkenke, oge adịghị agwụ agwụ, nkasi obi, nnwere onwe….
Azụrụ m iPad Pro na mmalite oge ọkọchị, dịka e webatara ọgbọ nke abụọ, yana Smart keyboard na Apple Pencil. Dịka i chere, echekwara m ego na ihe atọ ahụ. Ọzọkwa, kemgbe ahụ m na-eji iOS 11 (beta) nke mere ka m nwee ike iji ohere ya zuru oke site na nkeji oge. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ n'etiti mbadamba nkume kacha mma nke 2017, kwa iPad Pro, na nke ọ bụla n'ime nha ya, na ọgbọ mbụ, ga-eju gị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » mbadamba » Mbadamba ụrọ kacha mma nke 2017
Ndị na-agba ọsọ na-amalite ịbata na nnukwu ụlọ ahịa
Usoro ọgụgụ isi a nwere ike ịmara ihe ị na-eche